Barnaamijka Isku-dhajinta Shabakada Waxtarka leh ee Lagu Soo Bandhigo Kicin
Wareegga webka ayaa noqday istiraatiijiyad ganacsi oo aan lagama maarmaan ahayn
iyada oo dhammaanba ururada oo qaata. Nasiib darro, farsamadu si buuxda uma loo isticmaalin sababo caqabado ah. Dabcan, waxaad samayn kartaa raadinta internetka si aad u hesho waxyaabaha aad rabto, waadna koobi kartaa. Si kastaba ha ahaatee, taasi waxay suurtogal u tahay wax yar oo xog ah. Waxaad hubaa inaad u baahan tahay qalab duuban shabakadda si aad u ururiso qadar ballaaran oo xog ah. Caqabadda ugu weyn ee halkan waa shuruudaha khibrada barnaamijka.
Waxaad ubaahan tahay inaad leedahay khibrad barnaamij oo qibrad iyo aqoon ah si aad u awood ugu yeelatid in aad badiso qalab duubista webka si sax ah. Laakiin kaliya dad aad u yar ayaa leh khibrad barnaamijka. Marka laga soo tago, codsiga aaladda shabakadda ayaa ah mid aad u adag oo waqti-qaadasho u ah kuwa xitaa kuwa qibrada leh. Si aad uga sii darto, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad bedesho koodhka software-kaaga boggaga internetka ee loogu talagalay sababtoo ah bogg kastaaba waa mid gaar ah. Tani waa sababta qalabkan shabakada cusub ee webka uu adduunka u qaaday duufaan. Waxay ubaahan tahay aqoon la'aan barnaamijka, waana mid wax ku ool ah. Magaca qalabku waa OutWit Hub
OutWit Hub dhab ahaantii Firefox ah oo lagu daray oo lagu rakibi karo loona rakibo kambiyuutarkaaga. Iyada oo software ah, waxaad xoqin doonaa website-yada kala duwan oo kaliya dhowr jeer oo ka mid ah mouse-kaaga. Iyadoo barnaamijku leeyahay awooda lagu xoqayo noocyada kala duwan ee bogagga leh nidaamyada aasaasiga ah, waxaad sidoo kale u habeyn kartaa inaad ku habboonaato baahiyahaaga.
Halkan waa sida loo Isticmaalo Software
Waxaad u baahan tahay inaad ka soo qaadato dukaanka Mozilla iyo waxaad ku rakibtaa browserka Firefox. Ka dib marka la rakibo, isku-dar-ku-rogistu ma saameyn doonto illaa iyo intaad dib u bilaabi karto tarjumaankaaga. Waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah ikhtiyaarka xoqitaanka ee ku yaal qaybta bidix ee codsiga. Inkasta oo xulashadani ay yihiin aasaas, waxay kuugu filan yihiin inaad soo saaraan sawirada iyo qoraalka loo baahan yahay laga soo bilaabo bogga internetka ama mid ka mid ah xiriirada bogga.
Si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaaraadka asaasiga ahi ma qaban karo hawlaha webka ee horumarka. Haddii aad u baahatid fursado sare, waxaad u baahan tahay inaad tagto Automators, ka dibna u gudub Qaybta Sawirka. Cinwaanka source ee shabakada bartilmaameedkaaga ayaa lagu soo bandhigi doonaa halkan. Tallaabada xigta waa in la eego sifooyinka lagu soo bandhigay ee koodhka. Waxaa loo isticmaali karaa calaamadeeyayaasha waxyaabaha aad u baahan tahay kahor intaan soo saarin.
Hada, waa inaad buuxisid "Calaamadeeyaha kahor" iyo "Marker ka dib", guji badhanka dembiga. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad dib u fadhiisatid oo fiirso sida loo isticmaalo ToWet Hub shaqadooda. Barnaamijkani wuxuu ku siinayaa xoriyadda inaad isticmaasho jaranjaro badan oo isku mar ah, sidaas darteed hagaajinta wakhtiga lagu soo celinayo.
Tani waa nidaam guud oo lagu soo saaro xogta. Qaybta dukumiintiga ee ku-lifaaqan waxay ku yimaadaan casharro kala duwan oo loogu talagalay codsiyada kala-saarista xogta / baahida. Waxaad ka heli doontaa geeddi-socodka si dhakhso ah oo sahlan markaad iyaga barto. Sidaas darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad barato barashada diin ahaan.
OutWit Hub wuxuu awood u leeyahay inuu xakameyn karo xogta adag ee farsamooyinka leh shaqooyinka badan ee casriga ah. Marka, waxaad u baahan tahay inaad fahamto isticmaalka hawl kasta. Tusaale ahaan, in laga soo qaado xogta laga helo goobo bartilmaameedyo badan leh oo leh qaabab isku mid ah, waxaad u baahan tahay hawlaha loo yaqaan "Column Format". Ugu dambeyntii, OutWit Hub waa mid weyn xogta (7.) oo lagu daray barnaamijka iyo kuwa aan barnaamijka lahayn. Waxay kaloo leedahay shaqooyin badan oo ay tahay inaad barato. Qodobada ugu adag ee aad isticmaashid, sida ugu dhakhsaha badan iyo ka wanaagsan, natiijooyinkaaga boggaaga ayaa noqon doona Source .